Wedzera kupinda kune yakasviba modhi muTouch Bar yeMacBook yako | Ndinobva mac
Isu tatojaira kune yakasviba modhi uye iyo Kubata Bhawa yeMacBook Pro.Hazvigone kutaurwa kuti chinhu chitsva, zvisinei icho chinhu chatinoshandisa mazuva ese. Kana usati waigadzira kuti ishande otomatiki, uchafanirwa kuzviita nemaoko. Dzimwe nguva zvinonetesa kuzviita nenzira iyiNekudaro, ndiyo inoshanda zvakanyanya, nekuti ini ndini ndinotarisa kuti inoitwa riinhi uye riini.
Pane nzira yekuve izere kutonga uye kwete kuenda kuburikidza nematanho ese ekuti uite rima modhi nemaoko. Isu tinongoda kuwedzera mukana weiyi modhi muTouch Bar yeMacBook yedu. Tinokuratidza maitiro ekuzviita.
1 Yerima modhi muTouch Bar. Inokurumidza uye inoshanda
1.1 Kuwedzera chero chiito kuTouch Bar isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
1.2 Iye zvino ngatione kuti iwe ungawedzera sei tsika yechiito. Mune ino kesi iyo yakasviba nzira:
Yerima modhi muTouch Bar. Inokurumidza uye inoshanda
Chinokosha chiri mu Automator. Kuti inokwanisa kuita chero chiito otomatiki, kunyangwe nemifananidzo. Nenzira iyi, tinodzvanya bhatani paTouch Bar uye izvi zvinokonzeresa kuti chiito cheAutomator chiitwe, izvo zvinokonzeresa kuti AppleScript iitwe iyo inoita kuti rima mode riitwe kana kuremedzwa, kana chero chimwe chiito chatinotendera kuti tifunge kuti zviitwe.
Kuwedzera chero chiito kuTouch Bar isu tinofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Sarudzo dzeSystem> Kuwedzeredzwa. Tevere, mune yepadivi bar, isu tinosarudza Kubata Bhar uyen iyi pani. Panguva iyoyo isu tichaona ese ekukurumidza zviito zviripo. Kuti uwedzere imwe kuTouch Bar, isu tinongotarisa bhokisi rinotifadza.
Iye zvino ngatione kuti iwe ungawedzera sei tsika yechiito. Mune ino kesi iyo yakasviba nzira:
Iwe unotoziva kuti isu tichazoda kushandisa iyo Automator application. Tinoivhura uye isu tinogadzira mafambiro matsva ebasa (Hapana faira> nyowani) uye sarudza yekukurumidza kuita sarudzo. Nenzira iyi, chiito chitsva icho chatichagadzira kuburikidza nechishandiso ichaonekwa muPaneli Yezvekukurumidza.
Kugadzira chiito mumamiriro erima, izvo zvatinofanirwa kuita kuunza iri nyore AppleScript, izvo zvinoshandura pakati peimwe nzira kana imwe. Shanduko yekuvhura uye kudzima iyo yakasviba modhi, pese patinoda. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kungoteedzera nekuteedzera inotevera mirairo:
pane yekumhanyisa yekuisa, paramita
udza application "system Zviitiko"
taura zvimiro zvekuda
seti yakasviba modhi kwete yerima nzira
Isu tinochengetedza chiito chinokurumidza, kupa zita uye isu tinokwanisa kuwedzera kune iyo Kubata Bhar, munzira yatakaratidza kare. Kubva ikozvino zvichienda mberi uye pese paunoda kuita iyo yakasviba modhi, unogona kuzviita kubva kuTouch Bar, pasina kumwe kunetseka.
Kutevera iyi mirairo, unogona kuwedzera chero chiito chaunoda. Nzira yakasununguka uye isina kana kuoma. Tinokukurudzira kuti uedze uye ugovane nesu izvo zvawakazvisika iwe pachako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Wedzera kuwanikwa kune yakasviba modhi muTouch Bar yeMacBook yako